Mpamatsy sy ascenseur avo lenta ODM / OEM avo lenta | YiZheng
Elevator amin'ny siny no tena ampiasaina amin'ny fitaterana mitsangana ny akora granular
toy ny voanjo, vatomamy, voankazo maina, vary, sns. Namboarina tamin'ny vy tsy misy fangarony izy ireo
fananganana fahadiovana, fanamafisana mateza, haavon'ny fiakarana avo ary fahaiza-miteraka lehibe.
Inona no ilana ny Bucket Elevator?
Fiakaram-bary afaka mitantana fitaovana isan-karazany, ary noho izany dia ampiasaina amin'ny indostria sy fampiharana maro samihafa, na dia amin'ny ankapobeny aza dia tsy mifanaraka amin'ny fitaovana mando sy mametaka na fitaovana mihitsoka na mirona amin'ny matotra na aglomerat. Matetika izy ireo dia hita ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra, zavamaniry zezika, fikosoham-bary vita amin'ny pulp & taratasy ary toeram-pamokarana vy.
Ity andiany ity ascenseur siny novolavolain'i Yizheng tsy miankina ary fametrahana tsy miova izay ampiasaina indrindra amin'ny fampitana maharitra ireo fitaovana vovoka na akora granular. Ny fitaovana dia rafitra mahitsy, famolavolana volo, fanatanterahana famehezana tsara, fametrahana mora sy fikojakojana, mamela ny famahanana ara-nofo tsara sy miverimberina, ary koa ny fikirakirana sy ny fametrahana ny lamina.
Ity elevator bucket andiany ity dia azo jerena ao anaty fiara fitaterana mivantana, tarika sprocket na fiara reducer gear, manome rafitra mahitsy sy fandaminana mora. Ny haavon'ny fametrahana dia tsy voatery, fa ny ascenseur avo indrindra tsy mihoatra ny 40m.
Tombontsoa amin'ny bucket Elevator
* Fampitana 90 degre
* Ireo singa mifandray amin'ny vy
* Fitaovana fiarovana-tsy fanalana ny siny
* Mijanona ho azy & manomboka fanaraha-maso sensor miaraka amin'ny famenoana hopper na amin'ny ambaratonga
* Mora ampiasaina & mora diovina
* Caster ho an'ny fametrahana mora
* Safidy maro karazana ao anatin'izany ny fanondroana index, feeders, fonony, toerana fandefasana maro, sns.
Fampisehoana horonantsary Bucket Elevator
Safidy maodely ho an'ny Elevator
Mampita ny fahaizany (m³ / h）
Hafainganam-pandeha hopper (m / s)
Teo aloha: Mpampita ny fehikibo mahitsy mitsivalana mitsivalana
Manaraka: Masinina fanangonana zezika mandeha ho azy
Fampidirana Inona no atao hoe milina fanamafisana ny onja? Ny taranaka vaovaon'ny Counter Flow Cooling Machine izay notadiavina sy novolavolain'ny orinasanay, ny mari-pana ara-materialy aorian'ny fihenan-tsakafo dia tsy ambony noho ny maripanan'ny efitrano 5 ℃, ny tahan'ny rotsakorana dia tsy latsaky ny 3.8%, ho an'ny famokarana pellets avo lenta, manalava ny stora ...
Fampidirana Inona ny masinina Turner Composting Turner? Ny taranaka vaovao an'ny Double Screw Composting Turner Machine dia nanatsara ny hetsika fihodinan'ny axis roa, noho izany dia misy ny fiovan'ny fihodinana, ny fifangaroana ary ny oxygenation, ny fanatsarana ny tahan'ny fermentation, ny famotehana haingana, ny fisorohana ny fofon'ny fofona, ny famonjena ...